December | 2007 | Save Burma
World Focus on Burma (31-12-2007)
After Killings of the Burmese Monks; The Writing is on the Wall
After dominating every facet of Burmese people’s lives since 1962, Myanmar army is still nowhere near removing the rebel armies, consisted of ceasefire and …
India’s Halt to Burma Arms Sales May Pressure Junta
Burma, also known as Myanmar, is regarded as one of the world’s most repressive nations. The National League for Democracy, the party of Nobel Peace Prize …
13 and the first case in Burma, also known as Myanmar, inachild who was hospitalized in November and has recovered. The first confirmed case in Pakistan …
No More Cheap Oil?
… are clear: high fuel prices in combination with high food prices will give rise to political unrest, as events in Burma / Myanmar have proved in 2007. …
Bangladesh says bird flu spreads to more farms
DHAKA, Dec 31 (Reuters) – Bangladesh culled more than 2500 chickens after the H5N1 bird flu virus infected more farms in the northern part of the country, …
Editorial: At year’s end,aglobal agenda for compassion
Special cases: Chechnya, Myanmar (Burma), Zimbabwe. People in Chechnya who had fled conflict between local separatists and Russian forces are beginning to …
Faith, history unite two communities
… who worked in Burma in the early 19th century. With the modern Karen fleeing persecution in the land now known as Myanmar, “it’s like our history coming …
Thai elephants trample man
The Bangkok Post said that two men from Myanmar’s Karen ethnic group were ridingamotorcycle near the southern beach resort of Hua Hin on Sunday when they …
Malaysia allows Christian newspaper to name Allah
Journalists who write about religion chose the Buddhist monks of Myanmar (Burma) and their pro-democracy struggle over Pope Benedict XVI, President Bush, …
Tagged with Arms sale, Bangladesh, Bird flu, Burma, India, Junta, Monks, Myanmar, Newspaper, Oil, Pressure, Thai elephant
စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းမှ ရက်ရက်စက်စက် လူရိုက်သတ်ပွဲ
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းမှ တကယ့်အဖြစ်အပျက်
Duration –5min 31 sec –
Released – 28 Dec 2007
ဗီဒီယိုလင့်ခ် – http://video.google.com/videoplay?docid=2869499635191552664
နအဖ စစ်အာဏာရူးတို့က ပြည်သူလူထုအပေါ် ဘယ်လောက် ရက်စက်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ အထောက်အထား တခုပါပဲ။
ရန်ကုန်လို မြို့တော်ကြီးမှာတောင် ဒီလို ရက်စက်မှုတွေ ရှိနေရင် နယ်မြို့လေးတွေမှာ၊ ရွာတွေမှာ၊ တောချုံအုံကြားတွေမှာ ဒီထက်မက ရက်စက်နေမယ်ဆိုတာ ပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး။
မင်းမဲ့စရိုက်၊ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဆိုတာ တကယ်တော့ နအဖနဲ့ သူတို့လက်ပါးစေတွေက ကျူးလွန်နေတဲ့ အလုပ်တွေပါပဲ။
သက်သေ အထောက်အထားတွေ ရသလောက် စုဆောင်းကြပါ။ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သူတွေဆီကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ။
လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်နေတဲ့ သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူနိုင်အောင် လိုအပ်သလို ဆက်လုပ်သွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
World Focus on Burma (30-12-2007)
2007: the news in review
Sunday Herald, UK – Protests begin in Myanmar, formerly Burma, after diesel prices doubled, and India celebrated 60 years of independence, while Pakistan continued to lurch …
Bangkok Post, Thailand – Recent weeks have been frustrating for Aung San Suu Kyi, Burma’s democracy icon. Hope of starting political dialogue with the regime’s supremo, …
India Halts Arms Sales to Burma to Try to Press Junta
Washington Post, United States – Burma, also known as Myanmar, is regarded as one of the world’s most repressive nations. The National League for Democracy, the party of Nobel Peace Prize …
More anti-gov’t armed group members surrender in Myanmar
Xinhua, China –The Ywet-Sit-led SSA-S, along with three other anti-government organizations, the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), the All Burma …
Qatar Airways out of Myanmar
AME Info, United Arab Emirates –Qatar Airways has announced it is to cease its four timesaweek service to Myanmar, formerly known as Burma, from January9for ‘commercial’ reasons, …
Enriching the lives of childrenaworld away
… the Snyders startedanonprofit organization that has raised thousands of dollars to support many Christian orphanages in Myanmar, formerly Burma. …
Under sanctions, Myanmar’s economy crumbling
Times of Oman, Oman –
… when soldiers opened fire on the peaceful protests, which were led by Buddhist monks in Yangon and other cities around Myanmar, formerly known as Burma. …
Wyoming ministry comes to aid of young Myanmar girl
It was on one of those trips into Myanmar, formerly known as Burma, about three years ago when former staff member Tyler Groce encountered Shwe. …
New energy policy needed
Navhind Times, India –
… not yet completely written off the Iran-Pakistan-India gas pipeline deal and other gas sources in Central Asia and Myanmar (Burma) too are being tapped. …
Tagged with Arms sale, Burma, India, Myanmar, Qatar Airways
Al Jazeera Video: Crackdown on Saffron Revolution
Al Jazeera Video Of Protest & Bloody Crackdown In Burma
Al Jazeera’s Tony Birtley went undercover in Myanmar to report exclusively on the people’s protests and resulting bloody crackdown by Myanmar’s military government, talking to the protesters, filming the bloody crackdown and gauging the mood of the nation….
Part 1: 12mins 45secs
Part 2: 10mins 07 secs
This post is grabbed from Pseudonymity
လူ့အခွင့်အရေးဟစ်တိုင် – လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ကြဖို့ အီမေးလ် စီစဉ်
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ကြဖို့ အီမေးလ် စီစဉ်
မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ကြဖို့ စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေကို ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်တင်ပြကြဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက တိုက်တွန်းပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးပို့နိုင်မယ့် အီမေးလ် လိပ်စာကိုလည်း စီစဉ်ထားကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ကနေ စတင်လိုက်တဲ့ ‘လူ့အခွင့်အရေးဟစ်တိုင်’ အစီအစဉ်အတွက် အီးမေးလ်လိပ်စာတခုကို စီစဉ်ထားကြောင်း၊ ဒီ အီးမေးလ်လိပ်စာအတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ အထောက်အထားတွေ ပေးပို့ကြဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစိုးထွန်းက ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေကို စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း၊ တားဆီးပေးခြင်းမရှိ ဖြစ်နေရကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေ အပါအဝင် နိုင်ိငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို သက်သေ အထောက်အထားတွေအဖြစ်၊ ပေးပို့မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေကရှင်းပြပါတယ်။
ဒီလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို၊ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခံရသူ၊ ဒါမှမဟုတ် မျက်မြင်သက်သေတွေ ကနေတိုင်ကြားပေးပို့နိုင်ပြီး၊ တင်ပြရမယ့် ပုံစံ Form တခုကိုလည်း ပြုစုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အီးမေးလ်တွေကနေ တဆင့်ဖြန့်ဝေပေးနေပြီး၊ လောလောဆယ် စုဆောင်းရရှိထားတဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကို ပေးပို့ထားကြောင်း၊ လက်ခံရရှိသူတွေအနေနဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေကို တဆင့်ထပ်မံဖြန့်ဝေပေးဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အရင်က တိုင်တန်းတင်ပြတဲ့ပုံစံကို အင်္ဂလိပ်လို ပြုစုထားပေမယ့် အခုအခါ ပိုမိုလွယ်ကူအောင် မြန်မာလိုပါ ပြုစုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပေးပို့ရမဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာက hrhittaing@gmail.com ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေက ပြောပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှင့် အရှင် ဂမ္ဘီရ
Original Article – What Burma’s Junta Must Fear By U Gambira, Sunday, November 4, 2007; Page B07
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး၊ အရှင် ဂမ္ဘီရနှင့် ပတ်သက်၍ လက်လှမ်းမီရာ အခြား ဘလော့နှင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်များမှ တွေ့ရှိ ဖတ်ရှုရသည်များကို ဖြည့်စွက် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မိုးမခမှ ရသော ဓါတ်ပုံ
ဒေါင်းမာန်ဟုန် မှ ရသော ဓါတ်ပုံသတင်း
Person Of The Year 2007 Is U Gambira
ဦးဂမ္ဘီရ၏ ငယ်အမည်မှာ လှိုင်ဘွား(ခ) ညီညီလွင်ဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကပင် သာသနာ့ဘောင်ဝင်ခဲ့သည်၊
ရဟန်းမဖြစ်မီ ကိုရင်ဘ၀ (၁၉၉၀)တွင် သံဃာများ သပိတ်ကံဆောင်ရာတွင် ပါဝင်သဖြင့် ထောင်ကျခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ဇွန်လတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တွင် ပဏ္ဍိတရာမ ကျောင်းတိုက် (မန္တလေး) ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဦးဂမ္ဘီရ၏ အခြားဘွဲ့အမည်မှာ ဦးစန္ဒောဘာသ ဖြစ်ပြီး သံဃာလှုပ်ရှားမှုများတွင် အထက်မြန်မာပြည်မှ သံဃာများပါဝင်ရန် စည်းရုံးခဲ့သည်။
တိမ်းရှောင်နေရာမှ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာလဆန်းတွင် မြန်မာ အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံရပြီး ယခုတိုင်အောင် ထောင်ကျနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ သက်တော်မှာ ၃၂ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခံရသော၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် မော်ကွန်း ကြွင်းကျန်ရစ်သော၊ အခြား (Colour Revolution)များကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ဘာသာရေး အငွေ့အသက်ပါသော (Saffon Revolution) သင်္ကန်းရောင် တော်လှန်ရေးကြီး၏ အမည်နာမနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ သားတော်များမှ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော မြန်မာ့ဂုဏ်အတွက် ဦးစွန်းဦးရွတ် ခေါင်းဆောင်နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သူ ဦးဂမ္ဘီရ (ဆရာတော် စန္ဒောဘာသ)အား ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပုံများမှာ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တွင် ရိုက်ယူထားသောပုံများဖြစ်ပြီး ဦးဂမ္ဘီရမှာ သာသနာ့အလံ တော်ကိုင်ထားသော သံဃာတော်ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်ရှိ သတင်းထောက်မှ အတည်ပြုပါကြောင်း…….
Tagged with ဦးဂမ္ဘီရ
WorthaThousand Words: The Year’s Most Powerful Pictures
ABC News မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း မမေ့နိုင်စရာ ဓါတ်ပုံ (၁၂)ပုံကို ဖော်ပြထားရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဓါတ်ပုံလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
In 2007, the world wobbled unpredictably through martial law in Pakistan, vicious attacks on Buddhist monks (seen here marching through Yangon) supporting democracy in Myanmar, andahumanitarian emergency of unimaginable proportion in Darfur, whereacivil war has killed hundreds of thousands and displaced millions, according to U.N. estimates.
Other 11 images
Unforgettable Images of 2007
(ဓါတ်ပုံ – Reuters)
Tagged with Saffron Revolution
World Focus on Burma (29-12-2007)
Asia’s Latin America
… of their charter which upholds democracy and human rights even as they continued to ignore the proverbial “elephant” in their midst, Burma (Myanmar). …
Ha’aretz: From Bil’in to Madison Avenue: Demonstrations Outside …
International Solidarity Movement, Palestinian Territories –
The British newspaper “The Sunday Times” uncovered in September that Leviev’s diamond shop in London sold “blood” gems that originated in Burma [Myanmar], …
Winter cold reality for refugees
Myanmar (Burma): The mean annual temperature is about 81 degrees. The country has three seasons – hot season, monsoon and cool season. …
Cardinal DiNardo tops list of 2007 religion stories
Monks have led protests in Myanmar (once known as Burma) since before the country won independence in 1948. 2. Religion plays an increasing role in the …
In 2006, According to He Changchui, who works for the United Nation’s Food & Agriculture Organization (FAO), the bird flu situation in Burma (Myanmar) is …
… one of only 15 foreign airlines operating in and out of Myanmar, is suspending its four weekly flights to the military-ruled former Burma in January, …
Myanmar pilgrimage tests endurance
While drinking street-stall coffee in Yangon (Rangoon), I was advised by the vendor that southeast Myanmar (also known as Burma) is something ofano-go …
By Ecumenical News International Buddhist monks who led anti-government demonstrations in Myanmar (also known as Burma) have been selected as the top …
YANGON: Military-ruled Myanmar has detectedanew outbreak of bird flu among chickens in the country’s eastern Shan state, an official and state media said …
World Focus on Burma (28-12-2007)
Myanmar: Child recruits are the price of retirement in Burma’s army
It’s estimated that around 70000 child soldiers are serving in 727 infantry battalions of the Burma army. Many of them are victims ofapractice enabling …
US says no to UN millions for Libyan-led racism conference
UN Watch (press release), Switzerland –
In wake of Burma’s mass arrests and brutal killings of peaceful protesters, including many Buddhist monks, UN expert Paulo Sergio Pinheiro reported to the …
YouTube activists: Brothers win award for video about Myanmar refugee
YouTube user MaeSotwood The Karen are an ethnic minority living in the north of Myanmar, formerly known as Burma, who have been persecuted by the repressive …
Eight of the hotspots are considered the highest priorities for the survival of the most endangered primates: Indo-Burma, Madagascar and the Indian Ocean …
Local groups’ donations help former Myanmar residents get into …
Press of Atlantic City, NJ –
They are all refugees who fled the military regime of Myanmar (formerly known as Burma). But their time in America has not come easy, lacking evenaminimal …
World View – December 28, 2007
It added: “The electoral result also sentasignal toaregion still short on democracy, such as in Burma (Myanmar), China, and Vietnam. …
Buddhist monks in Burma refused to shut up about repression, leading massive anti-government demonstrations. At first, the sinister junta showed unexpected …
The odds are long, but those who seek tranquillity and good will …
The litany of civil war, violent oppression or terrorism continues with Myanmar (Burma), parts of India, Sri Lanka and other countries too numerous and …
8 heroin traffickers sentenced to death
Heroin, most of it from the Golden Triangle countries of Burma and Laos, is the most popular illegal drug in Vietnam and – because it is often injected with …
Weekly Business Roundup (December 28, 2007)
… Embassy in Myanmar, Tang Hai. The trade figures coincide withajust-finished trade fair in the Chinese town of Ruili, on the Yunnan border with Burma, …